Sawiro Beesha Geelidlle Oo Caleymo Saaratay Ugaas. – Calamada.com
Sawiro Beesha Geelidlle Oo Caleymo Saaratay Ugaas.
calamada July 15, 2018 2 min read
Qabiilka Geeladle oo kamid ah beesha Raxanweyn, ayaa munaasabad ka dhacday degaanka Madiinatul-kheyr, ku doortay Ugaas guud, taasoo ka dhigan iney hadda wixii ka dambeeya leeyihiin hogaan dhaqan oo ay ku mideysan yihiin meel walboo ay joogaan.
Hoos ka Daawo Sawirada Xafladda Caleymo Saarka Ugaaska.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 02-11-1439 Hijri.
Next: Saraakiil Iyo Askar Lagu Dilay Camaliyad Istish-haadiyo Ah.